» नक्कली सुन र पेस्तोल प्रहरीलाई दिने गिरोहका नाइके भारतीय ‘मोस्ट वान्डेट’ इल्ताफ हुसेन !
नक्कली सुन र पेस्तोल प्रहरीलाई दिने गिरोहका नाइके भारतीय ‘मोस्ट वान्डेट’ इल्ताफ हुसेन !
१६ श्रावण २०७७, शुक्रबार १०:५७
मकवानपुर । काठमाडौंमा नक्कली सुन र हतियार बरामद प्रकरणका मुख्य नाइके इल्ताफ हुसेन अन्सारी रहेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ । उनकै योजनामा सबै घटना भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ । इल्ताफ बाराका हुन् । उनी नक्कली भारतीय नोट कारोबारमा जेल परेका थिए । उनी नक्कली नोट कारोबार गिरोहका नाइके भनिँदै आएका युनिस अन्सारी समूहका सदस्य पनि हुन् ।
२६ जेठ ०६७ मा ललितपुर जिल्ला अदालतले अन्सारीलाई नक्कली भारु नोट कारोबारमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना सुनाएको थियो । उनी जेल परेर छुटेपछि सुन तस्करीलगायत अवैध क्रियाकलापमा लागेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । उनी भारतमा ‘मोस्ट वान्डेट’को सूचीमा रहेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रहरीले मंगलबार बिहान काठमाडौंको कमलादीबाट साढे १४ किलो नक्कली सुन र हतियार बरामद गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । जसमा आधा किलो सक्कली सुनसमेत थियो । तर तस्करले प्रयोग गरेको बा.६च ५५१९ नम्बरको स्कार्पियो सोही नक्कली सुन र हतियार भएको पेस्तोलको झोला फालेर भागेको प्रहरीले जनाएको थियो । काठमाडौंजस्तो सुरक्षित स्थानबाटै गाडी भागेको बताइएपछि प्रहरी अनुसन्धान विवादमा तानिएको थियो । विवादपछि प्रहरी अपरेसनको अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले घटनास्थल नै परिवर्तन गरेको र गाडीबाट झोला फालेको नभई प्रहरीलाई नै झोला दिइएको निष्कर्ष निकालेको छ । एक उच्च अधिकारीले भने, “कुन उद्देश्यले प्रहरीले गाडी भगायो त्यो खुल्न बाँकी छ । तर प्रहरीको मिलेमतो स्पष्ट देखिएको छ । घटनामा संग्लन तीनजना पक्राउ परेका छन् । फरार दुईजना छन् । यसमध्ये नाइके इल्ताफ पक्राउ परे सबै खुल्नेछ ।”
गाडीमा सुन र हतियार आइरहेको सूचना सबैभन्दा पहिले दरबारमार्ग वृत्तमा कार्यरत एक प्रहरीले नै दिएका थिए । तर गाडी झोला दिएर भागेपछि प्रहरीले उनैबाट अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले घटनास्थल नै परिर्वतन गरेको पाइएपछि प्रहरीमाथि आशंका बढेको हो । प्रहरी आर्थिक प्रलोभनमा परेको देखिएको एक अधिकारीले बताए ।
भारतीय व्यापारीबाट लिइएको थियो रकम
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएको नक्कली सुनमा भारतीय व्यापारीको लगानी रहेको खुलेको छ ।
छानबिन समितिका एक अधिकारीले भने, “यो गिरोहले भारतीय व्यापारीबाट रकम लिएर नेपालबाट सुन ल्याएर दिने बताए । तर सुन प्रहरीले पक्राउ गरेको देखाएर उनीहरुले रकम फिर्ता दिन नसकिने योजना बनाए । त्यसक्रममा उनीहरुले थोरै मात्रै सक्कली र अरु नक्कली सुन बनाए । त्यही योजनाअनुसार प्रहरीसँग सेटिङ मिलाए ।”
उनीहरुले भारतीय व्यापारीलाई प्रहरीले नै सक्कली सुनलाई नक्कली बनाएको भन्ने योजना बनाएको खुलेको ती अधिकारीले बताए । घटनामा संलग्न चारजना पूर्वी नवलपरासीबाट पक्राउ परेका छन् भने गाडी ललितपुरमा फेला परेको छ ।
प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी
समितिले घटनामा संग्लन प्रहरीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । जसमा अधिकांश दरबारमार्ग वृत्तमा कार्यरत प्रहरी पर्ने बताइएको छ । दरबारमार्ग प्रहरीको नेतृत्वले घटनाबारे समयमै माथिल्लो निकायमा खबर नगरेको पाइएको छ । समितिका एक सदस्यले भने, “सम्भवतः आजै कारबाहीको सिफारिस गर्छौं । यसमा धेरै अनुसन्धान आवश्यक देखिएन् । प्रहरीको संग्लनता प्रस्टै देखिन्छ । निलम्बनदेखि बर्खास्तीसम्मको सिफारिस गर्नसक्छौं ।”बाह्रखरी डटकमबाट